सप्तरीमा ‘ग्याङ् फाइट’मा परी घाइते भएका युवकको मृत्यु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सप्तरीमा ‘ग्याङ् फाइट’मा परी घाइते भएका युवकको मृत्यु
राजविराज । राजविराज–१ मा ‘ग्याङ् फाइट’मा परी घाइते भएका एक युवकको उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको छ।
सप्तरी सदरमुकाम राजविराज–१ मा गत मङ्गलबार दुई समूहबीच झडप भएको थियो। सो झडपका क्रममा गम्भीर घाइते भएका राजविराज–१ का भन्नालाल यादवका २१ वर्षीय छोरा प्रेमको ग्याङ् फाइटमा परी मृत्यु भएको पीडित परिवारले जनाएको छ।
गाउँमै ग्याङ् फाइटमा परेका प्रेमको टाउकोमाथि काठको चिर्पटले प्रहार गरिएकाले रक्तश्राव बढी भएका कारण उनलाई तत्कालै उपचारका लागि विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालमा लगिएको र उपचारकै क्रममा मृत्य भएको पीडितका बुवा भन्नालालले बताए।
मृतकका पारिवारिक स्रोतका अनुसार १२÷१३ जनाको समूहले प्रेममाथि एक्कासी आक्रमण गरेको र सो आक्रमणमा परी उनी घाइते भएपछि तत्कालै विराटनगर लगेर टाउकोमा ५२ टाँका लगाई उपचार थालिएको थियो।
यसैबीच प्रेमको शवसहित मृतकका परिवार, आफन्त तथा गाउँलेहरुले आज दिउँसो राजविराजमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रेमको शव विराटनगरबाट ल्याएर हत्यारालाई अविलम्ब पक्राउ गरी कारवाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो।
राजविराजस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रेमको शवसहित प्रदर्शन गरिएको प्रर्दशनमा सहभागी रेमन्त यादवले बताए। प्रदर्शन गर्दै उनको शवलाई नगर परिक्रमासमेत गरिएको थियो।
प्रदर्शनका क्रममा हत्यामा संलग्नहुनेको नाम ब्यानरमै किटान गरी अविलम्ब पक्राउ गर्न माग गरिएको छ। यसैबीच प्रेमको पुरानै रिसइबीका कारण हत्या भएको बताउँदै हत्यामा संग्लन व्यक्तिको तीब्ररुपमा खोजी कार्य भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक भावेश रिमालले जानकारी दिए।